‘Ny Tantara no Hanadio Ahy’: Nodimandry Teo Amin’ny Faha 90 Taonany I Fidel Castro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2016 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, עברית, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Fidel Castro nihaona tamin'ilay mpanamory sambondanitra Yuri Gagarin tao Havana tamin'ny taona 1961. Creative Commons.
Filohan'ny Kiobà efa ho 50 taona sady mpanorina ny Revolisiona Kiobàna i Fidel Castro, maty ny alin'ny Zoma 25 Novambra tao Havana. 90 taona izy izao nodimandry izao.
Taorian'ny ezaka maro nataon'i Castro sy ny hetsika ady anaty akata izay noforoniny tamin'ny taona 1952 mba hampihozongozona ny governemanta Kiobàna izay niha-naherisetra, nanafika ny lapam-panjakana tamin'ny andro Taombaovao 1959 i “El Comandante” (Komandà) araka izay efa niantsoan'ny olona maro azy ary naharesy ilay mpanao didy jadona notohanan'ny Amerikana hatramin'ny ela antsoina hoe Fulgencio Batista .
Nitondra an'i Kiobà teo ambanin'ny rafitra antoko tokana izy hatramin'ny nialany teo amin'ny fahefana tamin'ny taona 2008 izy ary namela an'i Raul Castro mba handimby azy ho Filohan'ny Repoblika.
Nitana sata nanana ny tantarany ho an'ny hetsika revolisionera helatra havia tany Amerika Latina sy tany an-kafa i Fidel nandritra ny dimampolo taona mahery. Nanome aingam-panahy ireo mpino sy ny mpahay tantara ny fampitahana mirazotra teo amin'i Fidel sy ny mpitondra fivavahana nanomboka tamin'ny kabary fitokanana izay nataony tamin'ny taona 1959 ary nahitana voromailala fotsy nipetraka teny an-tsorony. Azo antoka fa lasa olo-malaza izy ho an'ireo izay mankasitraka azy sy ho an'ireo izay mandà ny maha-mpitarika ara-dalana azy.
Takelaka ao Kiobà: “MIADY AMIN'NY ZAVATRA TSY ANTENAINA ARY MANDRESY .” Sary Jim Snapper. (CC BY 2.0)
Teo ambany fitondran'i Fidel, lasa firenena voalohany nandà ny fanampiana ara-toekarena avy amin'i Etazonia taorian'ny fanjanahantany any Amerika Latina i Kiobà, ary mazava tsara fa hanao fanamby amin'ny fandaharan'asany ara-politika ao amin'ny faritra izy. Tamin'ny taompolo 1960 sy 70, lasa mpitarika tamin'ny fampianarana oniversaly, ny rafi-pitsaboana sy ny zon'ny vehivavy i Kiobà ary nanome fanampiana ara-pitsaboana taorian'ny loza tany Afrika, Azia ary Amerika Latina. Teo ambanin'ny baikon'i Fidel, nanome fanohanana ara-tafika manan-danja ihany koa i Kiobà tany amin'ireo firenena nisy fikomiana sosialista anisan'izany i Angola, Nikaragoà ary ny Repoblika Demokratikan'i Congo ankehitriny .
Nanasongadina ihany koa ny endriky ny fitondrany malaza niaraka tamin'ny fanavaozana ifotony ny revolisiona Kiobana ny sivan'ny governemanta Castro tsy manam-paharoa, ny fanagadrana sy ny fanenjehana ireo mpanohitra, ny politika manohitra ny LGBT ary ny maodely ara-toekarena ho an'ny fahefana tafahoatra irery ihany .
Fantatra ihany koa noho ny kabariny masiatsiaka, mivantambatana sy tena lava i Castro. Nanao fanamby tamin'ireo mpanakiana izy tao amin'ny iray amin'ireo hafany malaza indrindra: “Melohy aho, tsy maninona izany, ny tantara no hanafa-pahotana ahy.”
Ireo zava-bitan'i Castro rehetra ireo dia miorim-paka amin'ny fomba fijery ara-tantara izay ahitana ny olona tsirairay tsy maintsy olo-masina na demony. Tsy maintsy iray amin'ireo.
Mizaka ny vokatry ny fahirano fanasaziana ara-toekarena napetrak'i Etazonia izay nampiady hevitra tamin'ny taona 1960 i Kiobà, politika izay lasa fitaovam-piadiana malaza ao amin'ny politika sy ideolojian'ny fitaovam-piadiana ao amin'ny governemantan'i Etazonia sy Kiobana. Nandritra ny taompolo maro, nanakatsakana tsy tapaka ny ezaky ny governemanta Amerikana hitsabaka sy hanonganana ny governemantan'i Castro ny governemanta Kiobàna sy ny sampam-pitsikilovany.
Niditra tamin'ilay atao hoe “Ny Fotoana Manokana Ao amin'ny Vanim-potoanan'ny Filaminana” ny nosy taorian'ny faharavan'ny Firaisana Sovietika tamin'ny taona 1989 izay nahitana ny tsy fisian'ny fanohanana tampoka avy amin'ny URSS ary nitondra fahasahiranana mafy ara-bola ho an'ny firenena. Niteraka fahafahana bebe kokoa hahafaha-mijoro ny vondronasa toy ny fizahantany tamin'ny fanavaozana ara-toekarena nandritra ny taompolo 1990. Ho an'ny Kiobàna sasany dia karazan-dalana ivoahana amin'ny fifanekena sosialista tamin'ny Revolisiona izany, fa ho an'ny hafa kosa, dia dingana tsy maintsy andalovana hanakanana ny firenena tsy hivarina any amin'ny faharavana ara-toekarena tanteraka.
Nandravona ny fifandraisana ara-diplomatikany Filoha Amerikana Barack Obama sy ny filoha Kiobàna Raúl Castro tamin'ny taona 2014, fa ny Kongresy Amerikana ihany no afa-mamarana amin'ny fomba ofisialy ny fanaovana ankivy izay ny antoko Repoblikana no mifehy ny toerana maro an'isa .
Nanambara fisaonam-pirenena maharitra sivy andro sy andiana fanomezam-boninahitra ny governemanta Kiobàna.
Angamba mitovy lanja ny fanajana sy fankahalana azy, fa ny toherin'ny vitsy dia ny satan'i Fidel Castro amin'ny maha-olona goavan'ny tantara maoderina azy.